instrumentalist, Nelly Furtado, mpamokatra, mpamoron-kira, mpihira
Nelly Kim Furtado(* 2 December 1978, Victoria, Kanada) dia mpihira Kanadiana, mpamoron-kira, instrumentalist, mpamokatra mozika ary mpilalao sarimihetsika malaza. 2000 dia nandrakitra ny fahombiazany voalohany tamin'ny rakikiraNoa, Nelly!, izay nahazoany ny loka Grammy malaza noho ny hiraToy ny vorona aho. Taorian'ny nahaterahan'ilay zanany vavy tao 2002 dia niverina tany amin'ny sehatry ny mozika niaraka tamin'ny rakikira izyFolklore, izay nisarika ny sain'ny ankolafy voalohanyForça(matetika nosoratana disoForca), izay ny hiram-pirenena ofisialin'ny Championship 2004 tany Portiogaly. Tamin'ny fahavaratra 2006 dia namoaka ny rakikirany fahatelo nantsoinahamaha, izay mahomby ihany koa ireo hitsikeranaManeaternaPromiscuous.
Izy dia fantatra amin'ny ankapobeny noho ny fanandramany amin'ny zavamaneno isan-karazany, noho izany izy dia manolotra mozika samihafa sy fifangaroana karazana sy kolontsaina samihafa ao amin'ny alàlany.
Teraka tany Victoria izy ary manan-janaka telo. Ny fahazazana dia niaina tany Victoria (British Columbia, Kanada). Ny ray aman-dreniny Maria Manuela sy Antonio Jose Furtado dia avy any Azores (Portugal). Nomena ny gymnast an'ny Sovietika Nelli Kim ilay anarana.
Nifindra avy tany Portiogaly nankany Parisy ny ray aman-dreniny tamin'ny faran'ny 60. taona. Ny ray aman-dreny miaraka amin'ny iray tampo aminy dia manana fifandraisana amin'ny kolontsaina, ary noho izany dia portogey tsara tarehy izy ireo.
Io fifangaroana kolotsaina hatramin'ny fahazazany io dia nisy fiantraikany tamin'ny fiteny roa ny hira voalohany noforoniny. Taty aoriana dia nanomboka nianatra teny espaniola sy Hindi izy tany am-pianarana.
Satria tsy nanam-bola be ny ray aman-dreniny, niasa tamin'ny tovolahy izy, niara-niasa tamin'ny reniny toy ny mpiasa an-trano, ary taty aoriana izy dia nomena ny mpikarakara trano. Rehefa niaiky tao anatin'ny tafatafa iray izy taorian'io, dia nanampy azy hahita ny tena izy izy ary nametraka azy teo amin'ny lalana tsara.
Niseho voalohany tao amin'ny fiangonana niaraka tamin'ny reniny izy nandritra ny fankalazanany andro Portiogey. Rehefa sivy izy dia nanomboka nianatra nilalao ny tononkalo sy ny ukulele, taty aoriana ny gitara sy ny fanalahidy.
Tamin'ny roa ambin'ny folo, dia nanomboka nilalao tao amin'ny tarika voalohany izy. Nihira tamin'ny teny portogey tamin'izany fotoana izany izy ireo, ary nanoratra ny tononkira i Nelly. Taona maro tatỳ aoriana, dia nanomboka nisy fiantraikany tamin'ny DJ ny mpihira. Nandritra ny fitsidihany an'i Toronto tao amin'ny 1996, dia nihaona tamina ekipa hip-hop Kanadiana izyMiaraha amin'ny Ranksary izany dia nisy fiantraikany teo aminy. Tamin'ny fahavaratra 1996 dia nivory niaraka tamin'ny duoNelstarnyNewkirkary niara-niasa izy ireo. Taona vitsy taty aoriana, nanjary nahaleo tena izy ireo, ary noraisin'i Nelly rakitsoratra vitsivitsy izay nanombohany nanalavitra ny mpitendry mozika, izay nanandrana ny ho any DreamWorks.
Mba hanamboarana azy voalohany, Gerald Eaton sy Brian West, izay nanampy azy hamoaka ilay album 2000 tamin'ny volana Oktobra, dia nanasa azy. Ny fahombiazan'ity rakikira ity dia ireo singa telo voalohany nomena anaranaToy ny vorona aho,Atsaharo ny hazavanany... Ao amin'ny radio (tsarovy ny andro). 2002 dia nahazo ny nomerao 4 ho an'ny Grammy Awards, ary ny farany dia nahazo ny lahateny iray sy ny hira vavy tsara indrindra ho an'ilay hira.Toy ny vorona aho. Ankoatra izany, ireo mpitsikera an'i Furtado dia noderaina noho ny feo sy feo samihafa. Gazety prestigehitongilanan'nyNolazainy ny rakikirany ho "mahafinaritra sy mamy". Ny rakitsary mahomby dia nahitana fitsangatsanganana nahomby izay nahazoany grady an'i Moby.
Talohan'ny namoahany ny rakikirany faharoa dia niteraka ny zanany voalohany, zanaka vavin'i Nevis izy. Ny Album Folklore dia navoaka tamin'ny novambra 2003 ary hira maro no nosoratana ho fahatsiarovana ny fahazazana tsy dia tsara, iray amin'ireo hira,Dream Dreams, nanokana ny zanany vavy kely koa izy. Ny ankamaroan'ny mpihaino dia nahazo hira iray antsoina hoeForça, izay nihira tao amin'ny portogey niaviany ary nanjary hiram-pirenena ofisialin'ny Champions League Football 2004. Nohiraina talohan'ny farany 4 ilay hira. Jolay 2004 tany Lisbonne. Ny hira manan-danja hafa dia lasa balladAndramona pilotPowerless (Lazao izay tianao).
Saingy tsy dia nahomby loatra ilay rakikira tahaka ny lahateniny, nilatsaka tamin'ny propagandy ny famoahana ilay famoahana, ka tamin'ny faran'ny 2005 dia niala tao DreamWorks ho any Geffen Records izy.
Ny albumy fahatelo dia navoaka tamin'ny volana 2006, ary nahomby tamin'ny fanaovana ny voalohanyNoa, Noa. Ilay mpihira dia niara-niasa tamin'ireo mpanakanto malaza toa an-dry Timbaland sy Juanes. Ary afaka nanao izany tamin'ny mpanakanto rehetra izy. Tany Eoropa, namoaka hira iray izyManeaterAvy eo dia nisy hira iray antsoina hoe AmerikaPromiscuous, ary nandritra ny herinandro dia nitarika ny sarivongana prestige tany Grande-Bretagne sy Etazonia.
Noa, Nelly!(navoaka 24 Oktobra 2000, varotra maneran-tany - 7 tapitrisa)
Folklore(25 novambra 2003, Millions 2)
hamaha(9 June 2006)
My Plan(14 Septambra 2009)
Ny tsara indrindra amin'ny Nelly Furtado(15 novambra 2010)
Tsy mety ny fanahy(17 Septambra 2012)
The Ride(31 Martsa 2017)
Vahao ilay fampisehoana(2007)
Toy ny vorona aho
Atsaharo ny hazavana
... Ao amin'ny radio (tsarovy ny andro)
Powerless (Lazao izay tianao)
Ny Grass dia maitso
Ny Zavatra Tsara (ho Foana)
Lazao izany tsara
Give it to me (feat Timbaland, Justin Timberlake)
Tsy mety ny fanahy
Broken Strings (ahitana an'i James Morrison)
1: Maneater (hira, Nelly Furtado)
2: Fa, Nelly!
3: Ny alina dia tanora
5: Ny drafitra
6: Toy ny vorona aho
7: ... ao amin'ny radio (tsarovy ny andro)
8: Hey, Lehilahy!
9: Lazao ny marina
11: Omeo ahy (Song, Timbaland)
13: Lalana Trynna Finda
14: Esory ny hazavana
20: Ny Zavatra Tsara (ho Foana)
22: Loka Eska Music Awards 2013
24: Tsy manan-kery (ambarao izay tianao)
26: Fetin'ny Antoko vao haingana (indray)
27: Maitso ny zohy
30: Mpihira mozika
31: Lehilahy iray minitra
32: Tsy misy hery
33: Misy olona tia
34: sary Perfect
42: lisitry ny mpihira R & B
43: Festival Atsimo-Atsinanana
44: Mozika voarakitra NZ
47: Tsy rava
48: 2. Desambra
Nelly Kim Furtado (* 2. 1978 Desambra, Victoria, Kanada) dia Kanadiana mpihira, mpamoron-kira, instrumentalist, mpamokatra firaketana an-tsoratra, ary tsindraindray mpilalao sarimihetsika. Ny fahombiazana lehibe voalohany tao 2000 ny rakikira Whoa, Nelly!, Izay nahazo ny Loka Grammy malaza noho ny hira aho toy ny vorona. Rehefa avy teraka ny zanany vavy ao 2002 dia niverina eto hijanona sehatra ny rakikira Folklore, izay ny tena hifantohany nifoha tokana Forca (matetika nosoratana diso Forca), izay ny hiram-pirenena ofisialy ny Eoropeana Football 2004 Championship tany Portogaly. Tamin'ny fahavaratra, ny 2006 dia namoaka ny rakikirany fahatelo, Loose, izay manasongadina ny hitsikerana Maneater na Fihetsiketsehana.
Maneater dia hira avy amin'i Nelly Furtado avy amin'ny lahatsary fahatelo Loose. Ny hira dia nosoratana miaraka amin'i Timbaland, izay namokatra ihany koa. Nivoaka voalohany tany Eoropa i Singl, toerana izay nahatonga an'i Furtado ho hira malaza indrindra hatramin'izao.
Noa, Nelly! dia ny albumy voalohany amin'ny mpihira Kanadiana Nelly Furtado. Navoakan'ny 24 ilay rakikira. October 2000 ary nahitako fitsapana goavana tahaka ny hoe voromahailala na manalavitra ny hazavana. Ho an'ilay hira tahaka ny vorona aho, dia nahazo ny loka Grammy be indrindra tamin'ny sokajy tsara indrindra amin'ny taona.
Night Is Young dia hira iray nataon'ilay mpihira kanadiana mpihira Kanadiana Nelly Furtado. Ilay hira dia avy amin'ny alahelony tamin'ny alàlan'ny albumy The Best of Nelly Furtado. Ny famokarana dia nataon'ireo mpamokatra salaam Remi sy Staybent Krunk-A-Delic.
Nelli Vladimirovna Kim (Нелли Владимировна Ким, * 29. 1957 Jolay Surab) Sovietika teo aloha dia mpanao fanatanjahan-tena, dimy andro Olaimpika tompon-daka sy dimy andro světa.Život tompon-daka dia Koreana ray sy ny reny ny Tatar izy io. Teraka sy lehibe tao Tajikistan, Kazakhstan, Shymkent, izay sivy taona, niofana tao amin'ny Club Spartak. Ny zaza tsy heverina ho talenta lehibe, ao amin'ny taona nahazo ny tompon-daka 1973 ny URSS teo amin'ny trano fisotroana mitovy ary nasaina tao amin'ny ekipam-pirenena izay dia nahazo ny fiadiana ny amboara eran 1974 anaram-boninahitra ao amin'ny ekipa fifaninanana. Amin'ny Lalao Olaimpika any Montreal 1976 niady rehefa niady tamin'i romanianina Nadia Comaneci, izay resin'ny in-manodidina, fa izy dia mpikambana ao amin'ny mandresy ekipa, ary nahazo olona volamena amin'ny andohalambony eny sy ny tany fanatanjahan-tena, izay noho ny fanatanjahan-tena, nankasitraka ny haja sy ny vehivavy azy ny teny, dia nahazo ny voalohany tamin'ny Lalao Olaimpika tantara feno folo. Tao amin'ny lalao olaimpika tany Moskoa, niaro ny loka voalohany tamin'ny fifaninanana ekipa sy ny saha i 1980. In-manodidina no zava-bitany lehibe indrindra azy any 1979 World Champion sy ny toerana faharoa amin'ny fiadiana ny amboara eran tamin'izay taona.
'Mi Plan no rakikira voalohany feno Espaniôla-mpihira sady mpilalao horonantsary Nelly Furtado sy ny rakikirany studio faharoa. Navoaka i 15. Septambra, Desambra 2009 2008.ProdukceV nivoaka tao amin'ny La Prensa El Diario Furtado lahatsoratra izay mikasa ny hitifitra teny anglisy sy espaniola hira noho ny tsy mivoaka vaovao album, izay antenaina ho tonga avy indraindray nandritra May ho any Aogositra. Tany am-piandohan'ny Martsa, dia tafaporitsaka nirakitra an-tsoratra ny hira "gotta mahafantatra", izay nilaza fa tompon'andraikitra amin'ny Furtado fotsiny. Furtado 4 namoaka ny valinteny tamin'ity hetsika ity. March 2009 tao amin'ny MySpace fanambarana fa ny hira dia tsy tiany, ary izay vao voarakitra Albums vaovao roa - ny iray amin'ny teny Espaniola ary ny iray amin'ny teny Portiogey. Tamin'ny Jona 2009 Dia nanambara ny anaran 'ny vaovao album, Mi Plan, ary ny anaran' ny voalohany tokan-tena, "Manos Al Aire".
Aho, toy ny vorona (aho toy ny vorona) dia faharoa tokan-tena avy amin'ny Nelly bitany Furtado ny rakikira Whoa, Nelly! .In fanadihadiana Nelly niaiky fa io koa ilay toerana tena hira, satria tsotra sy svobodná.I'm Toy ny vorona dia iray amin'ireo tokan-tena nahomby indrindra tamin'ny taona 2001, amin'ny tabilao mozika lehibe rehetra dia niondrana an TOP 10.Díky izao fihirana izao, Nelly Furtado nentiny teny an-2002 Grammy loka ho an'ny vehivavy tsara indrindra píseň.Videoklip ny hira dia ny fitarihan 'Francis Lawrence.Tracklist "aho toy ny Bird "(LP version) 'Party (Fitsapana)" (Non-LP version) "tsapako ianao", "ny fitiavana Nitsimoka Lalina" (Non-LP version) toerana eto amin'izao tontolo izao Fizaha Snippet-dahatsoratra aho toy ny voron-kely, I ihany no manidina lasa tsy mahalala Aiza ny fanahiko dia, tsy fantatro izay ny an-trano dia (sy ny zazakely rehetra mila anareo ny hahalala izany) aho tahaka ny vorona, izaho ihany no manidina tsy mahalala Aiza ny fanahiko , Tsy fantatro hoe aiza ny tranoko no ilainao ho fantatrao
... Ao amin'ny Radio (Mahatsiaro ny Andro) dia ny singa fahefatra amin'ny voalohany voalohany, Nelly Furtado, antsoina hoe Whoa, Nelly! Ny hira tany am-boalohany dia nantsoina hoe Shit teo amin'ny Radio, saingy ny teny Ny shit dia nailika ary nopotehina tamin'ny lohan'ilay hira.
Hey, Lehilahy! (Hey, ny lehilahy!) Ny singa fahadimy avy amin'ny rakikira Whoa, Nelly! Mpihira kanadiana Nelly Furtado. Navoaka tamin'ny alàlan'i Duo Gerald Eaton sy Brian West indray ilay hira. Hoy i Furtado momba ilay hira: "Tena hira malaza ity, fa vatolampy kely. Tamin'ny horonantsary fandraisam-peo dia nirakitra an-tsoratra izahay, saingy toa tsy nitovy mihitsy izahay. "
Lazao Ny Marina (Lazao izany marina) dia hira nosoratany Nelly Furtado, Timbaland sy danja ary lasa ny fahefatra tokan-tena avy amin'ny rakikira tsy mifatotra, Furtado Navoaka tamin'ny 2006.Píseň koa isika atolotry ny Grammy Award eo amin'ny sokajy vehivavy ny tsara indrindra píseň.InformaceProces manoratra izao fihirana izao dia nanomboka tao amin'ny Studio indray andro, manodidina ny efatra ora maraina, raha Timbaland Furtado kevitra dia navelany eto an-trano, satria reraka izy. Tsy nanaiky i Furtado ary nanomboka nively. Samy nanatevin-daharana an'ilay mpihira ny mpamokatra.
Folklore no sarimihetsika faharoa amin'ilay mpihira Kanadiana Nelly Furtado navoakan'i 25. Novambra 2003. Nahomby tanteraka ilay rakikira, saingy tsy nahatratra ny lazan'ilay rakikira voalohany, Whoa, Nelly!. Ny rakikira ihany koa dia ny hira song Força, izay lasa hiram-pirenena ofisialin'ny Championship football tany 2004.
Omeo ahy ny hira nataon'i Timbaland, izay nanampy an'i Nelly Furtado sy Justin Timberlake. Ny hira dia avy amin'ny alàlan'ny solo-peo Shock Value ary navoaka tao amin'ny 2007. Araka ny MediaTraffic, Give It to Me ny hira faha-10 mahomby indrindra amin'ny taona 2007. A dia nomena anarana ho an'ny loka Grammy ao amin'ny sokajy tsara indrindra amin'ny fiaraha-miasa. Ny fampahalalam-baovao rehetra amin'ireo tononkira telo dia manana anjara ao amin'ilay hira, hira avy amin'i Nelly Furtado ny hira. Timbaland koa dia niara-niasa tamin'ny mpanakanto roa tamin'ny alàlan'ny solo-solo azy ireo ary dia nanasa azy ireo hiara-miasa amin'ny alàlany.
Fuerte dia hira nataon'ilay mpihira kanadiana mpihira malaza Nelly Furtado. Ity hira ity dia avy amin'ny alàny fahadimy, Mi Plan, ary koa ao amin'ny version remix amin'ity albumy ity. Vokatry ny mpamokatra Salaam Remi.
Trynna Finda Way no laharana enina ary farany nosoratan'i Nelly Furtado avy amin'ny album voalohany. Nivoaka tao Meksika fotsiny ilay hira. Furtado dia namaritra ity hira ity ho toy ny fahatsiarovan-tena, ary nahazo tsindrim-peo avy amin'ilay antsoina hoe Bítníky ao amin'ity hira ity. Ao anatin'ilay hira dia misy fiantraikany eo amin'ny hip hop izay nahatonga azy ho voan'ny adolantsento. Afaka maheno ny fitaovana nentim-paharazana Breziliana momba ny berimbau ihany koa izahay. Ny Trynna Finda Way dia niseho teo am-pandrenesana ny horonan-tsarin'ny Diary ny Printsesa ary afaka nandre izany isika tao amin'ny Film Life.
Vonoy ny Fahazavana (vonoy ny mazava) no fahatelo tokan-tena Nelly Furtado, izay avy amin'ny voalohany lovia Whoa, Nelly! .In Etazonia nahazo ny hira na dia fahadimy toerana, izay no tsara indrindra toerana mandra-2006 rehefa nandresy tamin'ny hira Faly, izay tonga teo an-tampon'ny Billboard Hot 100.
Timothy Z. Mosley (* 10. 1971 Martsa Norfolk, Virginia), fantatra kokoa eo ambanin'ny solonanarana Amerikana Timbaland dia mpamoron-kira, mpamokatra ary mpiangaly rap, izay ny hira blurs ny fahasamihafana eo amin'ny valahana hop izahay, dihy sy ny mozika Pop. Izy koa dia mpikambana ao amin'ny vondrona hip-hop ao Timbaland & Mangoo.
Ny fandevenana dia ilay mpitovo avy amin'i Nelly Furtado avy amin'ny album fahatelo Loose. Navoaka tamin'ny 2006 ilay mpihira ary izy no voalohany nanatrika ny kaontinanta amerikana. Tany Eoropa dia nivoaka ho Maneater faharoa izy.
Ny fipoahana dia mpihira Kanadiana Nelly Furtado avy amin'ny Folklore. Ny hira dia nofantenana ho mpitoka-bolo fahefatra ary navoaka tamin'ny fararano 2004.Furtado momba ilay hira hoe "Ny hira dia tononkalo, niantso azy ho tovovavy iray rava aho. Rehefa maniry ny hanandrana ny zava-drehetra ianao dia toy ny tadio. Avy eo ianao hendry, fa ny ao anatiny dia ny fanahinao na ny fahantranao, saingy tsy maneho mandrakariva izany. Azafady, nanoratra aho fony aho nandeha tany Capoeira, britanika martial art, dia ny fanandram-pitiavako. "
Ny teny hoe maneater dia midika hoe: Maneater (Hall & Oates) - arahin'ny Hall & Oates
Andramo dia Nelly Furtado tokana avy ao amin'ny rakikirany faharoa antsoina hoe Folklore. Ny hira dia novokarin'i Brian West ary navotsotra ho toy ny singa faharoa avy amin'ny rakikira tao amin'ny ampahaefatry ny 2004. Nosoratana tamin'ny andiany roa koa ny hira avy amin'i Smallville sy Joan of Arcadia.
Ny zavatra tsara rehetra (Hifarana) dia mpihira iray Nelly Furtado, izay nanoratra niaraka tamin'i Timbaland, Danja sy Chris Martin. Navoaka tao amin'ny 2006 ilay tokan-tena ary izy no voalohany tamin'ireo takelaka Czech.
"Hot N 'Fun" no hira nataon'ny hip-hop Amerikana NERD Ny hira dia avy amin'ny lahatsoratry ny studio faha-efatra Nothing. Navoakan'ny mpamokatra ny Neptunes. Ity hira ity dia nanampy tamin'ny mpihira popy Portiogey Nelly Furtado.
Ny Eska Music Awards 2013 dia ny fanontana faha-telo an'ny Eska Music Awards, izay natao tao amin'ny 3. August 2013 tany Szczecin, Polonina. Ireo fampisehoana dia nalefa mivantana tao amin'ny TVP1 ary ireo mpanatontosa dia Ada Fijał sy Krzysztof "Jankes" Jankowski.
Loose no rakitsary fahatelo amin'ny mpihira Kanadiana Nelly Furtado, navoakan'i 9. Jona 2006. Ao anatin'ity rakikira ity, i Furtado dia niasa manokana niaraka tamin'i Timbaland, niaraka tamin'io koa izy nihira hira roa nahomby tamin'ny Maneater and Promiscuous.
Tsy manan-kery (Lazao Inona no Tianao) Bezmozný (Lazao hoe izay tianao) dia Nelly Furtado mpitovo avy ny faharoa album, navoaka Folklore, izay navoaka tamin'ny 2003.Singl namokatra ny mpivady Track & Saha ary nahazo ankapobeny tena tsara momba ny hira tsy manan-kery recenze.Furtado dia hoy izy: " hitako be dia be ny mampiseho izay mirona fomba hafa, ary tampoka nisy Nanova. Nanomboka nihetsika izany rehetra izany. Izany no tsindrimandry. Text stereotype no fiainana izay miaina eo amin'ny fiaraha-monina, fa misy ihany koa ny fihetseham-po sarotra izao tontolo izao. "
Força no singa fahatelo nataon'i Nelly Furtado avy amin'ny horonantsary Folklore faharoa. Ny hira dia mihira amin'ny teny anglisy miaraka amin'ny teny portiogey amin'ny teny Portiogey. Ny hira dia novokavoky ny Track & Field ary navoaka tsara. Ny famotsorana azy dia natomboka tamin'ny volana 2004, ary io hira io dia lasa hiram-pirenena ofisialin'ny Championship Football 2004 natao tany Portiogaly.
Ny vao nanomboka (indray) dia antoko tokana voalohany navoakan'i Nelly Furtado, izay niseho teo am-pandrenesana ny sarimihetsika Brokedown Palace. Navoaka tao amin'ny 2000 ilay hira, roa volana talohan'ny namoahana ny album Whoa, Nelly!.
Ny ahitra Maitso (Grass dia maitso) no farany tokan-tena avy amin'ny rakikira Folklore Canadian mpihira Nelly Furtado, izay nosoratana sy novokarin'ny Mike Elizondo.The Grass Maitso ny fahadimy ankapobeny tokan-tena avy ao amin'ny album, fa ny hany iray izay voarakitra an-tsary video. Noho izany dia navoaka tany amin'ny firenena vitsy monja izy, ary nahazo alalana tsara tany Alemaina.
Ny Shock Value (ny Timbaland Presents Shock Value ihany koa) no rakipahalalana faharoa sy rakitra fahadimy manontolo, avy amin'ny mpamokatra mozika sy ny rapper Timbaland. Io ihany koa no voalohany nalaza tao Timberand ny Interscope Records. Noraisin'ny mpanakanto fanta-daza toy ny Justin Timberlake, The Hives, Fall Out Boy, Keri Hilson, Nelly Furtado, Missy Elliott, 50 Cent, ny Dr. Dre, OneRepublic, Elton John, Magoo ary Nicole Scherzinger.
Get Ora Freak On Hip-hop tokan-tena nosoratan'ny Amerikana mpanao rap Missy Elliott sy Timbaland namokatra azy fahatelo Studio rakikira Miss E ... Dia Addictive.Byl nisaorana tahaka ny firaka tokan-tena avy ao amin'ny album, tonga ny takelaka Hot 7.místa 100 ary lasa ny fahadimy mahomby indrindra mibanjina afa-tsy ny daty . Ny tokan-tena tonga Missyina toerana tsara indrindra tany Angletera sy ny fahefatra ary dia nitoetra teo amin'ny Top 20 iray volana sy tapany. Nelly Furtado niseho tao amin'ny remix tamin'ilay hira. Ao amin'ny lahatsary hiseho toy ny vahiny Nate Dogg, Nicole Wray, Ludacris, Busta fanononana, Spliff Star, i Eva, Master P, Romeo, Timbaland, Ja Rule ary hihamangatsiaka LL J.
Music mpamokatra dia ny olona izay tompon'andraikitra amin'ny fahombiazana, fandraisam-peo, ny famokarana sy ny fampisehoana ny mozika nahrávky.Úkolem toy izany mpamokatra jeZpůsob hevitry ny mozika fantina interpretaVýběr hafa mpitendry ilaina amin'ny fampiharana ny dílaDohled ny nahrávkyVolí injeniera, fiaraha-miasa (izay) Manampy amin'ny famoronana Albums na singlůV elektronika mozika sy ny mozika pop, ny mpamokatra mikarakara ny fampifangaroana, mozika fandaharana, hainy, ary ny sangan 'ny tenany (sy ny fampiharana). Ao amin'ny mozika toy ny mozika kilasika mifanaraka mpamokatra eo ho eo ny talen'ny mozika.
Iray minitra Man Hip-Hop tokan-tena navoaka tao 2001 American mpiangaly rap Missy Elliott.V dikan-niseho tany am-boalohany sy Trina Ludacris, fa ny rakikira Miss E ... Dia Sarotra Ialana ny Ludacris nampiantrano ihany. Hira nataon'i Missy Elliott, Ludacris sy Trina ary novokarin'ny Timbaland, ary Missy Big Tank Elliott.V remix miseho Jay-Z, ary ihany koa ny rakikira Miss E ... Dia Addictive.Singl napetraka teo amin'ny takelaka Hot 15.místě 100 ary lasa ny faharoa faharoa 10 tokana ao Angletera izay napetraka tao amin'ny 10. Missy Elliott Get Ora Freak nampiseho izy sy iray minitra Man, miaraka amin'ny Nelly Furtado, Ludacris sy Trina amin'ny MTV Video Music Awards 2001 Ho fanomezam-boninahitra ny maty Nampalahelo mpihira Aaliyah. Ao 2002 lahatsary ho an'ny tokan-tena dia atolotry ny 6 MTV Video Music Awards amin'ny ny tsara indrindra Hip Hop Video, Best direkce, hanova Best, Best Art Direction, Best Special Effects sy Best Cinematography.
Mety ho tsy manan-kery: tsy manan-kery (Comics) - tantara an-tsary andian-dahatsoratra mpitory gaga Comics avy 2004Powerless (andian-dahatsoratra) - Baiboly fahitalavitra andiana 2017Powerless (hira, Linkin Park) - hira ny tarika Amerikana Linkin Park avy 2012Powerless (hira Rudimental) - Song of British ny vondrona Rudimental an'ny 2014
Olona ny Fitiavana dia afaka midika ny anaram-boninahitra: olona ny Fitiavana (hira Queen), hira ny taona 1976 ny rakikira Andro Iray amin'ny RacesSomebody ny Fitiavana (hira, Jefferson Fiaramanidina), hira ny taona 1967 ny rakikira Surrealistic PillowSomebody ny fitiavana (hira Nelly Furtado), ny tombony hazakazaka eo amin'ny rakikira LooseSomebody ny fitiavana (hira Leighton Meester), ny hira nivoaka 2009, nihira niaraka tamin'i Robin ThickemSomebody ny fitiavana (hira, Justin Bieber), mpitovo ny taona 2010 ao amin'ny rakikira My World 2.0Somebody ny fitiavana (film, 1994), tantara amerikana nataon'ny tale Rockefeller avy amin'ny 1994
Sary Perfect dia mety hanondro: Ao amin'ny horonantsary: ​​Sary tanteraka (film, 1995) - ny mampihomehy starring nilalao ny Dave Thomas sy Mary Page KellerPicture tanteraka (film, 1997) - ny tantaram-pitiavana mampihomehy, milalao Jennifer Aniston sy Jay MohrV boky sy gazety: Sary Perfect (tantara ) - ny tantara ny taona 1995 izay nanoratra Jodi PicoultPicture Perfect - ny tantara aingam-panahy avy amin'ny tantara mitohy amin'ny fahitalavitra ČarodějkyV mozika: Sary Perfect - Album rehetra AvenuePicture Perfect - Album ny SoilPicture Perfect - Album ny mpitendry piano Ahmad JamalaPicture Perfect - Album ny Sky "Sary Perfect" - hira mpihira Angela Via "Sary Perfect" - ny hira avy ao amin'ny tahirin-tsary ny feon'ny valifaty ny mpiangaly rap Chamillionaire "Sary Perfect" - ny hira avy ao amin'ny rakikira Exclusive ny Chris Brown ny "Sary Tonga Lafatra!" - ny hira avy ao amin'ny rakikira Cupcakes Andramo toy ny Herisetra amin'ny Jeffree Star "Sary Perfect" - hira avy amin'ny Change Your World nataon'i Michael Smith
"Maneater" manga maso fanahy / New Wave hira American Duo Hall & Oates, any amin'ny rakikira H2O, iray navoakan'ny orinasa RCA Records in 1982. Ny hira dia mihoatra ny efatra minitra ary nosoratan'i Sara Allen, Daryl Hall sy John Oates. Ny hira tonga teo amin'ny toerana #1 takelaka Hot 100 18 avy izay sisa. Desambra 1982 hatramin'ny 8. Janoary 1983.
Dima Bilan (Дима Билан amin'ny teny Rosiana), izay tena anarany Viktor Belan Nikolayevich (Rosiana Виктор Николаевич Белан) dia mpihira pop Rosiana karačejského sy Rosiana původu.Narodil amin'ny 24. Desambra 1981 in Ust-Džegutě in Karachay-Cherkessia ao amin'ny URSS (Rosia ankehitriny) .Dima nisolo tena Rosia tao amin'ny Eurovision Song Fifaninanana in 2006 ny hira Aza handefa anareo izy, rehefa vita ny faharoa. Roa taona taty aoriana, 24. Enga anie i 2008 ho mpandresy tamin'ny Grand Prix Eurovision 2008, miaraka amin'i Believe. Nanampy azy koa i Edvin Marton sy Yevgeniy Pljuschenko.
TWiiNS ny mpihira, mpanolotra, mpilalao sarimihetsika ary ny mozika kambana Daniela sy Veronika Nízlové (15. 1986 Hronský May Beňadik Tsekoslovakia) .www.twiinsmusic.euKariéraZpívat nanomboka tamin'ny mbola kely. Ny iray amin'ireo hira tiany voalohany dia "Boys" nataon'ny mpihira italiana Sabrina Selermo [loharano?]. Namoaka ny 4 CD izy ireo, izay nahazoany volamena telo sy platinum tokana. Nandritra ny efa-taona, naneho ny fahitalavitra "Hitbox" tao amin'ny fahitalavitra Markiza. Tao amin'ny mpikomy mozika dia nilalao ny anjara asan'i Tereza izy ireo. Aho tamin'ny Aprily 2008 nanoratra ilay hira "Tsy fantatro" lahatsary ho an'ny hira voarakitra ao Miami. Izao fihirana izao dia fiaraha-miasa amin'ny Amerikana mpamokatra Jimmy Douglesem, izay niara-niasa tamin'ny Timbaland, Nelly Furtado, Justin Timberlake, Duran Duran sy ny maro hafa. [Source?]
Dua Lipa (22, August 1995, Londres, UK) dia mpihira anglisy, mpamoron-kira ary modely anglisy. Teraka niaraka tamin'ny 22 izy. August 1995 tany Londres ho an'ireo Albaney foko any Kosovo izay nandao an'i Pristina tao amin'ny 90. taona 20. taonjato. Nanatrika ny sekolin'ny teatra Sylvia Young izy talohan'ny nifindrany tany 2008 niaraka tamin'ny fianakaviany tany Kosovo. Tao 16, niverina tany Londres izy mba ho mpihira. Fotoana fohy taorian'izay dia nanomboka niasa ho modely izy. Dukagjin Lipa rainy dia mpihira rock Kosovo-Albaney. Tao amin'ny 14, nanomboka nanoratra ny firafitry ny mpakanto azy indrindra izy, toa an'i Christina Aguilera sy Nelly Furtado, ary nametraka azy ireo tao amin'ny YouTube.
Keri Lynn Hilson (* 5 Desambra 1982 Atlanta, Géorgie, Etazonia) dia mpihira amerikanina mpihira sy mpamorona hira miaraka amin'ny Zone 4 / Mosley Music Group / Interscope Records. Izy dia anisan'ny ekipa mpanoratra sy mpamokatra fantatra amin'ny anarana hoe The Clutch.
Mark Paul Oakenfold (* 30. 1963 Aogositra, Greenhithe, Kent, Angletera), dia azon-tsindrimandry mpamokatra sy DJ. BiographyIn 1987, tia mozika dihy i Paul. Voasariky ny mozika avy amin'ny Ibiza, Italo Disco, fanahy sy ny trano, i Paoly dia nanomboka ny endrika, indrindra remixes avy U2, goavana Fanafihana, Nosamborina Development, Ny fanafodin'ny, Snoop Dogg Doggy, Simply Red, New Order sy The Shamen, amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Steve Osbornem eo ambanin'ny anarana Perfecto. Maro tamin'ireo remixes ireo no navoakan'ny orinasan'i Records Perfecto Records. Tamin'ny voalohany, nilalao tao amin'ny kliobia kely i Paul tamin'ny voalohany, saingy nalaza ho malaza DJ. Tao amin'ny 1994, namorona setroka roa ora ho an'ny BBC Radio 1 Essential Mix i Paul. Ity setika ity dia fantatra amin'ny anarana Goa Mix ary amin'izao fotoana izao dia iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny BBC Radio 1.
Champ-de-Mars dia zaridaina ho an'ny daholobe any Paris ao amin'ny 7. eo anelanelan'ny tilikambon'i Eiffel any avaratra andrefan'i École Militaire ao atsimo atsinanana. Ny faritr'ilay valan-javaboary dia 24,32 ha.
Ity ny lisitry ny sasany R & B sy ny Modern R & B mozika skupin.Rhythm sy bluesR & B mpanakanto (40. Taona 50. Taona) Johnny AceLaVern BakerJesse BelvinBrook BentonTiny BradshawCharles BrownRoy BrownRuth BrownRay CharlesArthur CrudupCecil GantRosco GordonWynonie HarrisScreamin 'Jay HawkinsClarence "Frogman" HenryIvory Joe HunterEtta JamesLittle RichardFats DominoLoyd Pricer & B, Doo Wop (50. taona) ny PenguinsThe CadillacsThe dimy SatinsThe CloversThe HarptonesThe dimy KeysThe CrestsFrankie Lymon & The TeenagersThe DellsR & B mpanakanto (60. taona) James BrownWilson PickettJoe TexAretha FranklinSam CookeOtis ReddingThe Funk Brothers (Motown) Ray CharlesThe bar-KaysThe SupremesBlue-maso R & B mpanakanto (60. fahavaratra ~) Marina BrothersThe RascalsThe AnimalsSteve WinwoodSpencer Davis GroupVan MorrisonThemHall & OatesGrass RootsHamilton, Joe Frank & ReynolsFrankie MillerTina MarrieAlison MoyetJoss Stoner & B mpanakanto (70. taona), James Brown (mpanao amin'ny 50. taona) Wilson PickettJoe TexR mpiray RoyceThe TrammpsStevie Wonder (mpanao amin'ny 60. taona), ny fakam-panahy (mpanao amin'ny 60. taona) efatra TopsChaka KhanSpinnersKool Jackson & The GangFunkadelicStylisticsThe 5Brothers JohnsonR & B / Lahatsoratra-Disco mpanakanto (80. taona) Michael manondro JacksonThe SistersShalamarSkyyDeniece WilliamsRay Parker, Jr.Fat Larry ny BandEvelyn "Champagne" KingThe ManhattansD. TrainPrinceThe WhispersTina Turner (mpanao amin'ny 60. Taona) LakesideThe SOS BandSoučasné R & BR & B mpanakanto - manomboka (80. Taona) Janet JacksonJermaine JacksonKeith SweatFreddy JacksonWhitney HoustonSurfaceMtumeLoose EndsLuther VandrossGeorge ClintonSoul II SoulBobby BrownNew Jack SwingToday (R & B) GuyWreckx-N-EffectKeith SweatBasic BlackJeff ReddBobby BrownJohnny KempMichael JacksonSWVBig Dada Moe CaneKool DeeJohnny GillBell Biv DeVoeR & B mpanakanto (90. ~ taona) AaliyahAkonAlicia KeysAnastaciaAshantiAriana GrandeBeyoncéBlack maso pitipoà
Ny Festival Southside dia fetiben'ny mozika izay mitranga isan-taona any atsimon'i Alemaina akaikin'i Tuttlingen. Misy antokom-pirafitranam-bato hafa sy mahazatra ao aminy, ny ampahany betsaka amin'ny fandaharan'asa dia ahitana antokom-poko ao an-toerana. Ny fampitana mivantana ny rindran-kira tsirairay dia miandraikitra ny fantsom-baovaon'ny VIVA, ny MTV German. Ny fetibe ho an'ny tanindrazany dia antsoina hoe Rivo-doza, izay mihatra amin'ny fiteny iray any avaratr'i Alemaina hatramin'ny 1973. Ny fandaharanasa dia nitovitovy tamin'ny Southside tao anatin'izay taona vitsy izay, ary tsy misy afa-miseho amin'ny fotoana fotsiny.
Ny Music Records NZ (RMNZ), taloha ny Fikambanana Mpisintana Recording ao Nouvelle Zélande (RIANZ), dia orinasa orinasa tsy mikambana miaraka amin'ny mpamoaka mozika sy mpaninjara any Nouvelle Zélande. Ny mpikambana dia azo alaina ho an'ny mpitendry mozika rehetra miasa eto amin'ity firenena ity.
Justin Randall Timberlake (* 31. 1981 Janoary Memphis, Tennessee, USA) dia American mpihira sady mpilalao, sivy andro Grammy nahazo loka sy efa-andro Emmy nahazo loka Awards.Do amin'ny mpihaino natao malaza amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny zaza tarika 'N Sync. Ao amin'ny 2002 dia namoaka ny voalohany irery album, nohamarinina, izay nivarotra eran-tany 7 tapitrisa mahery. Timberlakovo rakikira faharoa FutureSex / LoveSounds dia nafahana tao Septambra 2006 sy ny hira telo avy ao amin'ny birao no laharana voalohany takelaka Hot 100. Izy koa dia nanangana ny orinasam-panoratana manokana, Tenman Records ary William Rast.
Ny anarana ofisialy dia ny Fetin'ny Hira Italiana (Festival della canzone italiana). Natao isan-taona hatramin'ny 1951 ao amin'ny tanàna spa ao Sanremo, Liguria. Ny taona voalohany dia navoaka hatramin'ny fahitalavitra 1955. Ny fetibe dia fitaomam-panahy ho an'ny fifaninanana Eurovision.
Unbroken dia album-drakitra amerikanina mpihira Amerikana sady mpamoron-kira Demi Lovato. Navoakan'ny 20 ilay rakikira. September 2011 avy amin'ny Hollywood Records. Demi dia niara-niasa tamin'ireo mpamokatra sy mpanoratra maro toy ny Toby Gad, Rock Mafia, Timbaland, Dreamlab ary ny hafa. Ny votoatin'ny lyric tamin'ilay rakikira dia voatery niantraika be tamin'ny olana ara-pihetseham-pon'ny mpihira izay navoaka tamin'ny faran'ny taona izay nandefasana an'i 2010 ho fanasitranana. Taorian'ny ady nifanaovan'ny mpandihy niaraka tamin'ny Jonas Brothers rehefa tonga tany aminy i Demi. Ny rakikira dia voakasik'ireo mozika popy sy mpihira an-drenivohitra toy ny Rihanna sy Nelly Furtado.
Desambra no 336. andro ny taona ao amin'ny kalandrie gregorianina (337. amin'ny dingana isan-taona). Ny faran 'ny taona mbola 29 dní.UdálostiČesko1805 - Napoleonic Ady: frantsay ny tafika notarihan'ny Amperora Napoleon fetra ny nandresy ny Russo-Aotrisy tafika tamin'ny ady tao Slavkova.1848 - Olomouc zo aotrisianina Emperora Ferdinand I. Ny vaovao mpanjaka lasa valo ambin'ny folo, rehefa Ferdinand zana-drahalahin'i Franz Joseph I. iza ary no nanjaka valo amby enim-polo taona.
Fisandohana dia kanto, na asa ara-tsiansa fa nisy olona hafa noho ny tena mpanoratra lainga impersonating azy. Toy izany asa atao hoe plagiace na fisandohana na plagiátorství.Definice Czech Copyright Act - tsy toy ny ohatra amin'ny teny alemà - ny foto-kevitra ny fisandohana no tsy ary tsy mamaritra ny Iraisam-pirenena ISO 5127-2003 mamaritra azy io ho "mampiseho ara-tsaina asa iray hafa mpanoratra, nindramina na Nanahaka an'i manontolo na toy ny ampahany. " Ny fiarovana mihatra amin'ny kanto sy ny asa ara-tsiansa, "izay tsy manam-paharoa vokatry ny famoronana asa" Raha toa tsy miangatra niteny izy, fa koa ny fandikan-teny fandaharana, banky angona, sy ny sisa. Ny Copyright Act mazava milaza fa iharan'ny lalàna fiarovana - ary dia toy izany no tsy plagiace - tsy "manokana lohahevitry ny asa mihitsy, isan'andro tatitra na hafa voalaza ao mihitsy, hevitra, fomba, fitsipika, fomba, fahitana, Siantifika-kevitra sy ny toy izany raikipohy, tabilao antontan'isa sy ny foto-kevitra toy izany mihitsy. "